Mombamomba ny orinasa sy ny kolotsaina eo amin'ny orinasa - Dongguan Jiankelong Hardware Co., Ltd.
Dongguan Jiankelong Hardware Co., Ltd.izay manampahaizana manokana amin'ny vokatra vy tsy misy fangarony dia ao amin'ny faritra indostrialy Songbaitang ao amin'ny tanànan'i Changping, Tanànan'i Dongguan, faritanin'i Guangdong. Tena mety ny fitaterana ary manakaiky ny seranan-tsambo ao Shenzhen. Ny orinasanay dia mandrakotra 25000 metatra toradroa, ary zavamaniry 30000 metatra toradroa hafa kosa eo am-pananganana. Ny zavamaniry misy antsika dia ny atrikasa fanodinana milina, atrikasa vita amin'ny vy tsy manangona atrikasa, atrikasa takelaka vy, atrikasa famoriana kabinetra vy, ary atrikasa famolavolana vy tsy miangona.
Manokana izahay amin'ny fantsom-boaloboka vy sy ny lalantsara, ny makarakara sy ny tatatra, ny rindrina vita amin'ny metaly avo lenta sy ny vy, ny fonosana vy tsy misy fangarony ho an'ny gara. Miisa enina tanteraka ny vokatra Series. Ny vokatra rehetra dia mampiasa vy tsy metaly 304 & 316 miaraka amin'ny fomba famaranana samihafa hahatratrarana ireo takiana samihafa amin'ny mpanjifanay. Hatreto, ny vokatray dia efa namidy be sy fantatry ny tsena anatiny sy ivelany, anisan'izany ny HongKong, Singapore, Australia, Europe, Amerika Avaratra ary Moyen Orient.
JKL dia mifikitra amin'ny filozofia momba ny asa «mitady fahavelomana amin'ny kalitao, mivoatra amin'ny fanavaozana ary mamorona firindrana amin'ny serivisy». Nahazo ny anaram-boninahitra sy ny taratasy fanamarinana ny "China Famous Products", "China Famous Brands", "China's Preferred Products for Project Construction", ary "National Quality Reliable Products". Nahazo laza tsara izahay, ary nitombo ny fitaomana androany amin'ny andro. JKL izao dia fantatra amin'ny anarana hoe "manam-pahaizana momba ny fikirakirana arintany vy tsy misy fangarony."
JKL dia nandalo ny rafitra fitantanana kalitao ISO9001-2015, nahazo ny anaram-boninahitra marika malaza any amin'ny faritanin'i Guangdong.
Asongadinay ny fampandrosoana ny kolontsainay: hanompo ny mpanjifantsika sy hiara-hitombo; hanaja ireo mpamatsy antsika ary hahatratra ny toe-javatra mandresy; hikarakara tsara ny mpiasanay ary hiara-hizara. Amin'ny fampiroboroboana ny kolotsaina orinasa, ny fivelarana sy ny varotra dia mitombo isan'andro. Nahasarika manam-pahaizana be dia be izahay hanatevin-daharana ny orinasanay, ary manakaiky ny internationalizaton ny haavon'ny fitantananay.
Ny tanjonay amin'ny fampandrosoana maharitra dia ny ho orinasa mpamokatra fitaovana malaza indrindra ao amin'ny Delta Delta River ary manome ohatra tsara ho an'ny mpiara-miasa amintsika! Miaraka amin'ny fitsipiky ny fandraharahana amin'ny fanomezana ny mpanjifa vokatra sy serivisy tsara indrindra, hananganana fananganana kilasika voalohany hatrany.
Tongasoa eto JKL ary vonona hiara-miasa aminao izahay. Andao hiara-mamorona ho avy mamiratra kokoa！
Handrail vy tsy miova, Handrails, Fametahana Handrail mitsangana, Tohatra Handrail Bracket, Handrail amin'ny vy mahery, Takelaka fototra Handrail,